Logocloud: akụrụngwa emepụtara site na ndị na - ahụ maka okwu okwu - Ọzụzụ Nkụzi
Logocloud: ego efu nke ndị na - ahụ maka ọgwụgwọ na - ekwupụta
Emepụtara ibe a na-esochi ihe mberede COVID-19 nke na-egbochi ohere ịnye na ịnweta usoro ọgwụgwọ okwu. Ndị na-agwọ ọrịa okwu ị hụrụ nke a kpọtụrụ aha na ibe a ejiri mmesapụ aka kesaa ihe ha iji nye ụmụaka na ndị toro eto ohere inwe ihe omume n'ụlọ mgbe ha na-echere ịmaliteghachi ọrụ nkịtị. Ekele sitere n’obi na-enye ha niile.
Peeji a enweghị ngwa weebụ m mere, nke dị n'efu na GameCenter site na TrainingCognitivo. Iji zitere m njikọ nke mmemme ma ọ bụ ihe ederede, dee m [email protected] na-akọwapụta aha gị, aha ihe omume na nkọwa nkenke maka onye ga-eji ya. Ọ dị mkpa na ihe ezigara enweghị ihe onyonyo ma ọ bụ ọdịnaya nke ejiri nwebisiinka chebe. Nkwanye ugwu ndi okacha amara nke ndi oru ibe ha, ihe edeputara bu ndi n’enwetaghi aka edeputara.
Llalla,,, pho,, Sy,,,,,,,
Ekwekọrịta nkeji nke Elena Angelucci
Kpoo aha ndị ahụ site na mbụ dị ụtọ c ma chọpụta ihe egwuregwu nke Benedetta Ticozzelli dere
Kpoo mkpụrụ okwu na / f / ma chọpụta ihe egwuregwu nke Benedetta Ticozzelli dere
Aha okwu / k / ma chọpụta ihe omimi (1) nke Benedetta Ticozzelli dere
Aha okwu / k / ma chọpụta ihe omimi (2) nke Benedetta Ticozzelli dere
Jiri aha / l / + kpọpụta aha ndị ahụ wee chọpụta ihe omimi ahụ nke Benedetta Ticozzelli dere
Jiri okwu nkwụnye / r / + kpọọ aha ndị ahụ ma chọpụta ihe omimi ahụ nke Benedetta Ticozzelli dere
Kpoo aha ndị ahụ site na / s / mbụ ma chọpụta ihe omimi ahụ nke Benedetta Ticozzelli dere
Jiri aha mbụ / s + kpọpụta aha ndị ahụ (1) chọpụta ihe omimi ahụ nke Benedetta Ticozzelli dere
Jiri aha mbụ / s + kpọpụta aha ndị ahụ (2) chọpụta ihe omimi ahụ nke Benedetta Ticozzelli dere
Kwuo mkpụrụ okwu na / sz / ma chọpụta ihe omimi ahụ nke Benedetta Ticozzelli dere
Jiri okwu / t / etiti wee kpọọ okwu ndị ahụ ma chọpụta ihe omimi ahụ nke Giorgia Zaghini dere
Jiri aha mbụ / v / mede kọwaa okwu ndị ahụ ma chọpụta ihe egwuregwu nke Benedetta Ticozzelli dere
Rimkpa oke r / l nke Alessandra Rocchi dere
Discriminationkpa oke na Ski / Ci nke Giulia Montagnese dere
Rimkpa oke t / d nke Elena Angelucci
Ka anyi mee achicha (onomatopoeia) nke Giulia Montagnese dere
Kedu ihe bụ nkeji nkeji mbụ nke Alice Martinelli dere
Riddles na-atọ ụtọ C n'etiti ọnọdụ nke Giorgia Zaghini dere
Agwu ya na etiti T nke Giorgia Zaghini dere
Ncheta nke bisyllables ewepụghị nke Alessandra Rocchi dere
Ncheta nke okwu ya na uto c na nmalite nke Giorgia Zaghini dere
Ncheta nke okwu na / k / nke Benedetta Ticozzelli dere
Ncheta nke okwu ya na f f nke Benedetta Ticozzelli dere
Ncheta nke okwu na / s / mbido nke Monica Checchin dere
Ncheta nke okwu ya na s / s / + consonant site na Sara Frizzarin
Echeta okwu na etiti -ST- (1) nke Roberta Benedetti dere
Echeta okwu na etiti -ST- (2) nke Roberta Benedetti dere
Echeta okwu na T- (1) nke Giorgia Zaghini dere
Echeta okwu na T- (2) nke Giorgia Zaghini dere
Ncheta nke okwu na / ts / nke Bendetta Ticozzelli dere
Ncheta nke syllables na S site na Sara Frizzarin
Okwu egwuregwu na ụtọ C nke Giorgia Zaghini dere
Lelee foto mgbochiume S + site na Sara Frizzarin
Chọpụta mgbochiume izizi site na Sara Frizzarin
Syllables na S (chọpụta foto zoro ezo) site na Sara Frizzarin
onomatopee nke Giorgia Zaghini dere
Jikọta okwu ọnụ na otu nkeji okwu mbụ nke Alice Martinelli dere
Aha okwu ya na k / k / nke Ambra Cravero
Kpoo aha ya na / tr / ma choputa ihe egwuregwu nke Serena Immovilli
Ncheta nke okwu na / tr / nke Serena Immovilli
Egwu na g / g / nke Maria Elisa Canale dere
Icheta okwu na sc nke Maria Elisa Canale dere
Dakọtara nkeji okwu na leta M nke Valentina Piazzoli dere
Dakọtara si nkeji na leta V nke Valentina Piazzoli dere
Dakọtara si nkeji na leta L nke Valentina Piazzoli dere
Dakọtara si nkeji na leta F nke Valentina Piazzoli dere
Dakọtara nkeji okwu na leta N nke Valentina Piazzoli dere
Okwu otu ya na ndi otu SP (Ben10) nke Sara Manzi
Ntinye Okwu ya na otu SP (Frizen) nke Sara Manzi
Naming onu ogugu enwere ugbua na / k / median (SpiderMan) nke Sara Manzi
Ebe nchekwa mbu nke Alice Fazzone dere
Jikọta ọnụ ọgụgụ ndị na-amalite otu ụzọ nke Alice Fazzone dere
Jikọta ihe osise ejedebe na otu nkeji nke Alice Fazzone dere
Icheta ukwe nke Alice Fazzone dere
Ncheta syllable ikpeazụ nke Alice Fazzone dere
Quadrisyllabic okwu egwuregwu nke Alice Fazzone dere
Atụmatụ egwu na / r / nke Alice Fazzone dere
Ihe egwuregwu Bisyllable nke Alice Fazzone dere
Okwu ịgba mgba nke Alice Fazzone dere
Hygha ndị ị ga-achọ ịlụ 1 nke Alice Fazzone dere
Hygha ndị ị ga-achọ ịlụ 2 nke Alice Fazzone dere
Ihe omimi SKI (onodu mbu na etiti) nke Francesca Austoni dere
Ebe nchekwa SCI (ọnọdụ amalite) nke Francesca Austoni dere
Ebe nchekwa SCI (ọnọdụ mbido na etiti) nke Francesca Austoni dere
Akụkọ ihe mere eme nke nri ụtụtụ nke Monica Checchin dere
Zobe ma kọọ akụkọ "Hedgehog, squirrel na ofufe" nke Sara Frizzarin dere
Megharia ma kọọ akụkọ ahụ "urukurubụba urukurubụba" site na Sara Frizzarin
Akụkọ n’usoro nke Alice Martinelli dere
Tinyegharịa usoro iheomume nke Ambra Cravero
Readinggụ ihe na ide
Dakọtara nkebi ahịrịokwu ahụ na onyinyo ahụ (1) nke Alberto Mariotto dere
Dakọtara nkebi ahịrịokwu ahụ na onyinyo ahụ (2) nke Alberto Mariotto dere
Otu edemede nke Alessandra Rocchi dere
Cloze (isiokwu nke Hart Hart) nke Alessandra Rocchi dere
Mechie 1 nke Giulia Savio dere
Mechie 2 nke Giulia Savio dere
Mkpebi mkpoputa nke Alessandra Rocchi dere
Hangman nke okwu ya na CH nke Alberto Mariotto dere
Hangman nke okwu na CI-OA nke Alberto Mariotto dere
Hangman nke okwu na GL nke Alberto Mariotto dere
Hangman nke okwu na GN nke Alberto Mariotto dere
Hangman nke okwu ya na SC nke Alberto Mariotto dere
Ka anyị gụọ… GH / CH nke Elena Angelucci
Chọta ezi okwu / foto ụzọ abụọ nke Alberto Mariotto dere
Discriminationkpa oke CI / GI nke Giulia Groppelli
Jikọta okwu na eserese nke Alice Martinelli dere
Kpa oke nke okwu na V na F nke Alice Martinelli dere
Guo ahịrịokwu ahụ ma jikọọ ya na onyonyo nke aka nri nke Alice Martinelli dere
Okwu okwu na akwa mmiri nke Claudia Fusari dere
Mechie gn / gl nke Roberta Marracino dere
Close nke nzube nke Roberta Marracino dere
Nghọta nke ahịrịokwu nke Diego Abenante dere
Usoro edemede na usoro ọmụmụ
Itinye okooko osisi, ngwa na nri nke Alessandra Rocchi dere
Ka anyị nweta ya nke Elena Angelucci
Egwuregwu na agba nke Ambra Cravero
Tugharia umu anumanu site na nke kachasi rue pere mpe nke Ambra Cravero
Oritọ nri na savory nri nke Ambra Cravero
Ịtụ obere akpa (mkpụrụ ego) nke Serena Immovilli
Tụ obere akpa (mkpụrụ ego na mpempe akwụkwọ) nke Serena Immovilli
Enwere m ike ịzụta ya maka € 2,5? nke Serena Immovilli
containers nke Diletta Ruggeroni
Ime ụlọ / egwuregwu n'èzí nke Diletta Ruggeroni
Anyị na-agụ! nke Elena Angelucci
Ilu dị na tebụl ọtụtụ nke Giorgia Zaghini dere
Anyị na-enye iwu nọmba 1 ruo ise nke Alberto Mariotto dere
Yuro ma ọ bụ obere Euro? nke Serena Immovilli
Karịa ma ọ bụ obere? (1) nke Serena Immovilli
Karịa ma ọ bụ obere? (2) nke Serena Immovilli
Oghere na oge
Choo uzo ihe abua (ehihie) nke Serena Immovilli
Chọta ụzọ abụọ (ụtụtụ) nke Serena Immovilli
Kedu oge ọ bụ? nke Serena Immovilli
Ntughari na imeputa uzo abuo S / T kacha nta
Onye edemede: Elena Campana
njikọ: Budata na Drive
Omume ịkpa oke ụbụrụ
Onye edemede: Francesco Petriglia
Otu esi eji ya: N’ime mmemme ndị a, a na-ejikọ ụda ọ bụla na ụcha ya na agwa ya, ọrụ nwata ahụ bụ ịmata ma ụda onye okenye kwuru ọ dabara na nke izizi ma ọ bụ nke abụọ. Iji maa atụ, mgbe ọ bụla okenye kwupụtara nkeji okwu SA, nwatakịrị ahụ ga-arụtụ aka na gburugburu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n’elu ihuenyo ahụ iji kwalite agwa ahụ. Ọ bụrụ, n’aka nke ọzọ, okenye na-akpọ FA, nwata ahụ ekwesịrị ịkọwa gburugburu odo odo. I ghaghi igbanwe ya site na iju nwatakiri ka o weputa nkeji okwu kwesiri, ebe onye toro eto gha agha n olu o bu nke o nuru.
Ihe maka ịkpa oke t / k
Onye edemede: Alice Sordi
Ebube CA / CIA Goose Game
Onye edemede: Federica Ciceri
Semantics - Kedu ihe onye omekome ahụ
Onye edemede: Debora Bibiano
Semantics - Myirịta na iche
Choo okwu ndia na v
Onye edemede: Priscilla Malhamè
Jiri v vọta okwu
Itinye okwu na edemede
Rimkpa oke s / ts
Onye edemede: Bruna Agostinis
Nkọwa: mgbe i jikọtara ụda / s / na agwọ ahụ na ụda / ts / na scissor, bido ihe ngosi ahụ, pịa akụ aka nri wee gee ụda ahụ ma ọ bụ mkpụrụedemede ya ma gwa nwata ahụ ka o metụ agwọ ahụ ma ọ bụ scissor ahụ aka. dabere na ụda a nụrụ, onyonyo kwekọrọ na-agagharị naanị mgbe anyị pịa ya na oke.
/ v / na olulu na ominka
Nkọwa: bido ihe ngosi ahụ, na ịpị akụ aka na-eme ka ụgbọ mmiri na-aga ma n'otu oge ahụ na-ejikọ ekwentịme / v / ịgbatị ya ruo ụdaume; na ịpị akụ, onyinyo gosipụtara na aha ya.
Onmụ anụmanụ na onomatopoeic ụda
Nkọwa: bido n’usoro, pịa na anụmanụ ọ bụla ga-anụ amaokwu nke dị na ya.
Agụụ nghọta - mmefu
Nkọwa: bido ihe ngosi, gwa nwatakịrị ahụ ka o metụ nri aka site n'ịgụ n'elu aka nri, site na ịpị akụ ahụ nri ga-abanye n'ụgbọala ahụ.
Chọta onye wutere ya
Nkọwa: bido ihe ngosi ma gwa nwa ahụ ka o metụ onye omekome ahụ aka, foto ziri ezi ga-agagharị naanị mgbe anyị pịa ya na oke.
Nkọwa: bido ihe ngosi ma gwa nwatakịrị ahụ ka o metụ ihe oyiyi ahụ malitere dị ka nke dị n'etiti, mgbe nwatakịrị ahụ metụrụ ihe oyiyi ziri ezi aka, pịa akụ dị n'akụkụ aka nri iji weta ihe nkwado ahụ.
Nkọwa: bido ihe ngosi ma gụọ nkeji okwu ahụ, gwa nwatakịrị ahụ ka o metụ ihe onyonyo bidoro na mkpụrụ okwu ahụ, mgbe nwata ahụ metụrụ foto dị mma aka, pịa akụ dị n’aka nri ka o wee wulite ya.
Echiche gbasara ohere: Ebee ka ọ dị?
Nkọwa: na ppt ndị a niile na slide mbụ ị nwere ike ịjụ nwatakịrị "olee ebe X?", Mgbe nwatakịrị ahụ zara (dịka ọmụmaatụ "na nkata"), site na ịpị akụ dị n'aka nri nke ihe oyiyi na-egosi (dịka ọmụmaatụ nkata) na, ịpị ọzọ, mkwado na-egosi.
Na slide ikpeazụ, n'aka nke ọzọ, ọ ga-ekwe omume ịmebe nhazi nke ahịrịokwu dị ogologo site na enyemaka nke ahịrịokwu agba: ị nwere ike ịjụ nwatakịrị ahụ "gịnị na-eme?" ịpị akụ dị n’aka nri ga-egosi otu ihe n’ahịrịokwu n’otu oge.
njikọ: Lontano - na - Sotto - on - Vicino
Ebee ka ọ na-aga?
Onye edemede: Veronica Marrocu
Nkọwa: N'ihe mmega a dị mfe, a na-ajụ nwatakịrị ahụ ka ọ kpọọ aha onyinyo ahụ dị elu, mgbe ọ bụla aha ya, a na-agwa ya ka ọhọrọ nkata ziri ezi (mkpụrụ ma ọ bụ ihe oriri?).
njikọ: Budata na draịva
Animanu: igosiputa ihe na ntolite
Onye edemede: Greta Caligaris
Nkọwa: n'ime faịlụ ahụ
Egwuregwu ee ee na mba
Na-agụ ihe edere ede
Onye edemede: Elena Minno
Metaphonological egwuregwu nke ọgazị
Nkọwa: Na egwuregwu a dị mfe nke ọgazị iwu bụ kpochapụwo.
Iji kpọọ gị mkpa itinye faịlụ na ngosi mode. Site na ịgbakọ ọnụ ọgụgụ nke igbe nke ị na-abata, a na-eziga gị na slide na mmega ahụ ka ị rụọ. Ihe omumu obula nwere ihe onyonyo a na-aru oru mgbe apuru igho.
Warning. Firstkwesịrị nwalee ọrụ ahụ maka na ọ bụrụ na ịpị òké ahụ ọtụtụ oge ị ga - ejedebe na mmịị na - esote.
Iji laghachi na ihuenyo na egwu ahụ, dị nnọọ pịa akara ngosi Minnie Mouse na ala.
Obere obere omume na ihe niile adị mfe 🙂
Naanị ntụpọ .. enweghị ego ma ... anyị na-azụ ebe nchekwa site na ịjụ nwatakịrị ahụ ka o cheta ọnọdụ ya !!
Tingtọ / s / + consonant na etiti ọnọdụ
Onye edemede: Gloria Bimbi
Nhota nke / f / na onodu mbu
Onye edemede: Alessandra Scafasci
Okpomoku na okwu bisyllabic
Ndị edemede: Cecilia Saioni na Chiara Gordiani
Ikpe kacha nta
Rimkpa oke DT
Ọrụ olu F
Ndị edemede: Sara Ravasio
TD opekata mpe
Ndị edemede: Cecilia Saioni
Airsbere obere abụọ / t / - / k /
Ndị edemede: Rosaroberta Marini
Ihe omimi nke agwọ nọ na mbara - / sp / intervocalica
Ndị edemede: Chiara D'Alessandro
Akụkọ ihe mere eme maka / k / e / ts /
Ndị edemede: Federica Demurtas
Nkọwa: Bido ngosi. Nwa ahụ na-ekwughachi naanị okwu ndị na-acha uhie uhie, wee pịa otu ugboro ma na-atụ anya na ihe ngosi niile ga-eme
Ofja maka ukwe ukwe
Ndị edemede: Simona Corsi
Nkebi ahịrịokwu: onye ọkpụkpọ ga-emerịrị ahịrịokwu ahụ site na ịmepụta rhyme
Rhymes hotara n'etiti uzo abuo: onye ọkpụkpọ aghaghi ima, họrọ n’etiti nhọrọ abuo, okwu n’egha
njikọ: Egwuregwu egwu Rhymes ahọrọ n’etiti nhọrọ abụọ
Rimkpa oke / m / na / n / na nke kacha nta
Ndị edemede: Martina Lazzari
Bingo na / v / mbido
Bingo nwere ekwentị dị iche iche
Ndị edemede: Claudia Morassutti
Amalite na ... mbido usoro MA-SA
Ndị edemede: Veronica Viti
Echiche nke Topological - ebee ka Dade na Lili di
Ndị edemede: Davide Mongelli na Linda Bottura
Rimkpa oke m / n
Rimkpa oke r / l
Ọgazị egwuregwu na / k / etiti
Ndị edemede: Lucia Botti
Nkewa: nkpuru osisi na akwukwo nri
Ndị edemede: Greta Calligaris
njikọ: Gwuo na Scratch
Kpa oke megide okwu ndị yiri ya
Nkọwa: Ọ bụrụ na okwu ndị ahụ bụ otu, ozugbo nwata ahụ zara ọfụma, pịa ogwe oghere ma otu ụzọ ụmụaka ahụ ga - agagharị, ọ bụrụ na mkpụrụokwu ahụ dị iche, pịa akụ aka nri. Mgbe otu n’ime di na nwunye ahụ rutere nso na nkata ahụ, okwu ahụ “ezigbo mma” ga-apụta.
Ebe nchekwa kesara
Egwuregwu nke ukwe
Ndị edemede: Dora Ghidelli
Ebe nchekwa Spat
Akụkọ ntolite ịtọ / k /
Akụkọ banyere mmekọrịta mmadụ na ibe ya na mmetụta ya
Onye edemede: Giulia Montagnese
Onye edemede: Elisa Tosi
Obere ụgbọ elu Red Red na-agbagharị na CAA
Onye edemede: Manuela De Santis
njikọ: Lelee vidiyo na YouTube
Anụmanụ: ikpughe ihe nnọchianya
Onye edemede: Greta Calligaris
Onye edemede: Alice Marotta
Otu esi eji: Faịlụ okwu nha na-enye gị ohere ịzụ ebe nchekwa gị. Omume a bụ icheta okwu a gụrụ ma kwughachi ya n’olu dara ụda, mgbe ọnụọgụ ụfọdụ (1 ma ọ bụ 2) gasịrị, mgbe rektangulu na-acha odo odo na efu. Iji jiri faịlụ ahụ tinye ya na ngosi wee jiri òké ma ọ bụ oghere ohere mee ka slides gaa n'ihu. Enwere ike idozi ike, enwere ndepụta 4 na oge nke 1 na otu na oge nke 2, tinye okwu ọhụrụ na ntanetị
njikọ: Uzo nke 1 Uzo nke 2
Ntị na ọrụ ndị isi
Tebụl ebe nchekwa na arụ ọrụ (4 syllables)
Etu esi eji ya: Site n'isobe tebụl syllable, a na-agwa nwatakịrị ka o buo ihe dị iche iche na ọnọdụ ha n'isi. Site na iwepu tebụl syllable ma gosipụta tebụl n'ụzọ, nwatakịrị ahụ ga-akpọrịrị syllable dị n'ụzọ ahụ.
Kaadị mmetụta Stroop
Etu esi eji ya: Kaadị maka ịrụ ọrụ ịkpọ aha ngwa ngwa, mana n'ụkpụrụ stroop
Egwuregwu gbara akụ / agbada
Nkọwa: Mmega ahụ bụ PASAT: na ọnọdụ ngosi a gwara gị ka ị cheta ọnụọgụ ahụburu na mbụ wee tinye ya na nke ị bụ
ikiri. Maka ụmụaka ndị emetụlarị na mmega a, agba na-enye ohere ime ka ọrụ ahụ sie ike, dịka ọmụmaatụ:
otu ihe mmegharị kwekọrọ na agba;
mgbanwe nke ọrụ dabara na agba (dịka ọmụmaatụ site na + ruo x)
Nkọwa: A gwara gị ka ị kpọọ aha ahụ ma ọ bụrụ na akwụkwọ ahụ dị ọcha, ebe agba akwụkwọ a chọrọ ma ọ bụrụ na ọ nwere agba. Maka ụmụaka nwere ahụmịhe, a ga - ejikọ ya na otu iwu (ịmaatụ: "kụọ aka gị mgbe ọ na - acha ọbara ọbara", ma ọ bụ "ekwula ihe ọ bụla mgbe odo dị").
Ànyị na-akpaghasị onye na-ahụ maka okwu??
Nkọwa: Ngwá ọrụ iji rụọ ọrụ na:
- ndọtị nke nkebi ahịrịokwu
- usoro oge
- lexicon na mmepụta
Lynx - egwuregwu nlebara anya
Description: Budata ntuziaka
Ntị maka usoro nke agba na agba dị iche iche
Nkọwapụta: Ngosipụta ike nke nwere ihe omume ndị na-akpali icheta ncheta, anya nlebara anya, nlebara anya. A na-agwa onye ọrịa ahụ ka o jiri anya nke uche hụ ya ma cheta usoro na agba na agba. Mgbe igosi usoro nke ọ bụla, a ga-agwa ndị ọrịa ka ha rụọ ọrụ. Gbaso ogbugbu nke ihe a rịọrọ, ọ na-arịọ ka verbalize usoro nke na agba / shapes mbụ e gosipụtara, na-eso nyere ibiere.
Ncheta na Nleta Anya
E kewara ọrụ ahụ ụzọ atọ siri ike.
Na ọkwa mbụ, a ga-enye nwata ahụ kaadị abụọ: kaadị ọ bụla nwere anụmanụ, agba na nọmba. Ngosipụta nke kaadị ndị ahụ ga-ewe 5 sekọnd ma nwatakịrị ga-eburu naanị ọnụ ọgụgụ na anụmanụ nke kaadị abụọ ahụ n'isi. Mgbe ngosi ahụ, a ga-ajụ gị icheta ma ọ bụ nọmba ma ọ bụ anụmanụ.
Na ọkwa nke abụọ nwa ahụ ga-echetakwa agba nke kaadị ọ bụla.
N'ikpeazụ, na ọkwa nke atọ, na mgbakwunye iburu nọmba, anụmanụ na agba nke kaadị ọ bụla n'isi, nwatakịrị ahụ kwesịrị ịkpachara anya n'ihi na ndị na-adọpụ uche ga-apụta n'oge ikpughe nke kaadị.
Ihe ebe nchekwa ụlọ
Gụ mkpụrụ okwu na mkpụrụ okwu / k /
Gụ mkpụrụ okwu na mkpụrụ okwu / v /
Egwuregwu: ejula nwere ekwentịme /ʃ /.
Sygụ nkeji okwu, okwu na aha ekwentị na / s /, / ts / na / dz /
Gghọta nke syllable mbụ
Nkọwa nke onyonyo + ederede nke ngwaa
Nkewa ekwentị / grapheme
Onye edemede: Giulia Delfino
Onye edemede: Sara Jane Raffaello
Nkọwa: nwatakịrị ahụ hụrụ ihe oyiyi ahụ wee dee okwu ziri ezi, ozugbo ọ gachara, ọ nwere nzaghachi ọhụụ iji nyochaa izi ezi nke azịza ya
njikọ: CG Digrams na Trigrams Ihe onyonyo PB
njikọ: CG Digrams na Trigrams Mkpepe mkpoputa PB
Chọọ maka mmejọ
Na-agụ ìgwè dị iche iche
Ndị edemede: Chiara Campana
Mkpebi mkpebi nwoke Pac
njikọ: Kpọọ na ntanetị
Ọgụgụ na nghọta: Meatball
Nkọwa nke ihe onyonyo nwere nkwado na nlezi
Kaadị maka ịgụ akwụkwọ ngwa ngwa site na iri
Onye edemede: Elena Mattesini
Etu esi eji ya: Ebumnuche ya bụ ịgụpụta ọnụọgụ n'ime ngwa iri, iburu usoro nke ga-echeta ihe mbụ bụ ọnụọgụ tupu 10. Ọ bụrụ na ebipụta kaadị, a nwekwara ike ịhọpụta egwuregwu oge niile na ebumnuche na-arụ ọrụ na emere site na 10.
Nọmba nke egwuregwu
Rubamazzo nwere ọnụọgụ 10
Oge tebụl mgbagwoju anya (ugboro 8 okpokoro)
Nkọwa: tebụl bọọlụ ngụkọta Cognitive Training nlereanya
Ghọta eserese / ihe ncheta
njikọ: Amatara m eserese ahụ Na-amata ihe ncheta ahụ
Ihe emere Adriana Romano mere
Onye edemede: Adriana Romano
Nkọwa: folda a nwere ihe dị iche iche nke ọkà mmụta okwu okwu Adriana Romano mepụtara. Karịsịa ị ga-ahụ:
Foto iji mee kaadị
Ọgụgụ maka ekwentịme
Kaadị obere abụọ
Ihe site n'okirikiri
Ọnọdụ akụ na ụba nke Bing